गोसाइँकुण्ड र भैरबकुण्डको गहिराई मापन, कति समयमा आँउला नतिजा ? – Dainik Sangalo
गोसाइँकुण्ड र भैरबकुण्डको गहिराई मापन, कति समयमा आँउला नतिजा ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक ०१, २०७८ समय: १५:२४:५९
रसुवा, १ कात्तिक-रसुवाको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल गोसाइँकुण्ड र भैरबकुण्डको गहिराई मापन गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल माउन्टेन एकेडेमीले गोसाइँकुण्ड र भैरबकुण्डको गहिराई नापेको हो । अनुसन्धानकर्ता बासुदेव न्यौपानेको नेतृत्वमा गएको चार जनाको टोलीले गोसाइँकुण्ड र भैरबकुण्डको गहिराई नापेको हो ।
Last Updated on: October 18th, 2021 at 3:24 pm